चियाले चिनाएको जिल्ला इलाम । चियाबारीको गीत गाउन पाउँदा खुशी हुने राजनेताहरु । महँगोमा चिया बेच्न पाएका लठ्ठ व्यवसायिहरु । हाम्रो व्यस्तता यस्तैमा चल्दैछ । सामाजिक सञ्जालमा चियाबारीका सुन्दरताले स्थान लिएकै छ । यस्तो पहिचान बोकेको चियाको प्रवद्र्धनका लागि भने खासै चासो नदिइएको पाइएको छ । सरकारले पाँच वर्ष अगाडि प्राथमिकतामा राखेका चियाको अक्सन मार्केट कार्यान्वयन नहुँदा ओझेलमा परेको छ । शुरुदेखिनै भारतिय दलालहरुको चेपुवामा परेको चियाको बजारले नीजि स्तरबाट कारखाना खुल्न थालेपछि र तेस्रो मुलुक निर्यात भएपछि मात्र केहि राहत पाएको थियो । विदेश निर्यातका लागि आफ्नौ ब्राण्ड पाउदा समेत विवाद उछाल्ने राजनीतिकर्मीहरुले चियामा खासै मन लाएर हेरेको पाइदैन । चियाका बोट उखेल्न र डोजर लाउन पाए उनीहरु मख्ख पर्छन् । अर्गानिक अभियान र कृषिमा नगदेबालीको प्रवद्र्धन , पुर्वलाई चिनाउने चियाको विकास मा लगानी कस्ले गर्ने ?
भारतियहरुले आफ्नो अनुकुल बनाउन चियाको निकासी पनि प्रभावित पारिरहेका छन् । उनीहरुले निकासी गर्ने बस्तु एउटै वा अन्य फर्मबाट निकासी गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा चियाको बजार खुम्चनुका साथै किसानसम्म मुल्यमा गिरावट आउने गरेको हो । चियाको अक्सन मार्केट विर्तामोड आसपासमा स्थापना हुनुपर्ने व्यवसायिको मागलाई पाँच वर्ष वितेपनि सरकारले वेवास्ता गरेका छ । भारतिय व्यापारीका नामबाट सिलिगुडि जाँदा चियाको पहिचान गुमेको अवस्था छ । तयारी चियाको नव्वे प्रतिशत बजार भारतमा सिमित भएको चियालाई नेपालमै बजार व्यवस्थित बनाउन जरुरी देखिएको छ ।
चियाका लागि काम गर्ने सरकारी संस्था चिया तथा कफि विकास बोर्ड पनि दुइ नाउमा खुट्टा राखे जस्तो एैठन परेको जस्तो भएको छ । चिया उद्यमी र किसानका बीचमा कार्यालय राखेर यस्ले किसानका हित अनुकुल काम गर्नु पर्ने हो । सरकारसम्म लविड. गरी आम किसान र व्यवसायिको माग अनुरुप काम गर्नुपर्नेमा यस्तो कार्य हुन सकेको छैन । केन्द्रमा सरकारले वेवास्ता गरेपनि प्रदेशमा रहेको सरकारले चियाका विषयमा केहि बोल्छ कि । चासोको विषय भएको छ । प्रदेशले प्राथमिकतामा नराखे पुर्वी पहाडको पहिचान विस्तारै धरासायी बन्न बेर छैन ।